Geology of Indonesian Pumice – Pumice Stone Mining Company Pumice Stone Exporter Pumice Stone Supplier Batu Apung
Home / Uncategorized / Geology of Indonesian Pumice
Ny ampongabendanitra na ny vatolampy dia karazana vato maivana ny lokony, misy foam vita amin’ny bubble misy rindrina fitaratra, ary matetika antsoina hoe vera volkano silika.
Ireo vatolampy ireo dia voaforon’ny magmà asidra amin’ny asan’ny fipoahana volkano izay mamoaka akora ho eny amin’ny rivotra; dia mandalo fitaterana marindrano ary miangona toy ny vato pyroclastic.
Ny Pumice dia manana toetra avo lenta, misy sela maro (firafitry ny cellule) noho ny fanitarana ny foam entona voajanahary voarakitra ao, ary amin’ny ankapobeny dia hita ho toy ny akora manjavozavo na sombiny ao amin’ny breccia volkano. Raha ny mineraly hita ao amin’ny pumice dia feldspar, quartz, obsidian, cristobalite, ary tridymite.
Mipoitra ny pumice rehefa miakatra eny ambonin’ny tany ny magmà asidra ary mifandray tampoka amin’ny rivotra ivelany. Ny foam vera voajanahary misy / entona ao anatiny dia afaka mitsoaka ary mivaingana tampoka ny magma, ny pumice amin’ny ankapobeny dia misy toy ny sombin-javatra mivoaka mandritra ny fipoahan’ny volkano manomboka amin’ny vatokely ka hatramin’ny vatolampy.
Matetika ny pumice dia miempo na mikoriana, akora mivelatra na sombintsombiny ao amin’ny breccia volkano.
Azo atao amin’ny alalan’ny fanafanana obsidian koa ny pumice, mba hialan’ny entona. Fanafanana natao tamin’ny obsidian avy any Krakatoa, ny mari-pana ilaina hanovana ny obsidian ho pumice dia 880oC eo ho eo. Ny lanjan’ny obsidian manokana izay 2.36 tany am-boalohany dia nidina ho 0.416 taorian’ny fitsaboana, noho izany dia mitsingevana ao anaty rano. Ity vato pumice ity dia manana fananana hydraulic.
Ny pumice dia fotsy hatramin’ny volondavenona, mavo hatramin’ny mena, vesiculaire misy haben’ny lavaka, izay miovaova amin’ny tsirairay na tsy amin’ny rafitra may misy lavaka mitodika.
Indraindray dia feno zeolite/calcite ilay lavaka. Ity vato ity dia mahatohitra ando mangatsiaka (fanala), fa tsy hygroscopic (rano mitsentsitra). Manana fananana famindrana hafanana ambany. Herin’ny tsindry eo anelanelan’ny 30 – 20 kg/cm2. Ny tena firafitry ny amorphous silicate mineraly.
Miorina amin’ny fomba fananganana (desposition), fizarana ny haben’ny poti (sombiny) ary ny fitaovana niaviany, ny fametrahana ny pumice dia sokajiana toy izao:
New ardante; izany hoe fipetrahana miforona amin’ny fivoahan’ny gazy mitsivalana ao anaty lava, ka miteraka fifangaroan’ny sombintsombin’ny habe samihafa amin’ny endrika matrix.
Vokatry ny famerenam-bola (redeposito)
Avy amin’ny metamorphose, ny faritra somary volkano ihany no hanana fitehirizam-pofona ara-toekarena. Ny taona ara-jeôlôjika amin’ireo tahiry ireo dia eo anelanelan’ny Tertiary sy ankehitriny. Anisan’ireo volkano navitrika nandritra io vanim-potoana ara-jeolojika io ny sisin-dranomasin’i Pasifika sy ny lalana miainga avy any amin’ny Ranomasina Mediterane mankany amin’ny Himalaya ary avy eo mankany Inde Atsinanana.
Ny vato mitovitovy amin’ny vatolampy hafa dia ny pumicite sy ny volkano. Ny pumicite dia manana firafitry ny simika mitovy, niandohan’ny fiforonany ary ny firafitry ny fitaratra toy ny pumice. Ny fahasamihafana dia eo amin’ny haben’ny sombin-javatra ihany, izay kely noho ny 16 santimetatra ny savaivony. Ny pumice dia hita eo akaikin’ny toerana niaviany, fa ny pumicite kosa dia nentin’ny rivotra lavitra be, ary napetrany tamin’ny endrika fanangonana lavenona lehibe na toy ny antsanga tuff.
Ny sifotra volkano dia misy sombin-javatra mena hatramin’ny mainty, izay napetraka nandritra ny fipoahan’ny vato basaltika avy amin’ny fipoahan’ny volkano. Ny ankamaroan’ny fitehirizana cinder dia hita ho sombintsombin’ny fandriana conical manomboka amin’ny 1 inch ka hatramin’ny santimetatra maromaro ny savaivony.
Potensian’ny Pumice Indoneziana
Any Indonezia, ny fisian’ny pumice dia mifandray hatrany amin’ny andiana volkano Quaternary ka hatramin’ny Tertiary. Ny fizarana azy dia mandrakotra ny faritr’i Serang sy Sukabumi (Java Andrefana), ny nosy Lombok (NTB) ary ny nosy Ternate (Maluku).
Ao amin’ny nosy Lombok, Nusa Tenggara Andrefana, nosy Ternate, Maluku, ny mety hisian’ny petra-pofona manana lanjany ara-toekarena sy tahiry be dia be. Tombanana ho 10 tapitrisa taonina mahery ny tahiry voarefy any amin’iny faritra iny. Tany amin’ny faritr’i Lombok, efa dimy taona lasa izay no nisian’ny fitrandrahana vatolampy, raha tany Ternate kosa vao tamin’ny taona 1991 no nanaovana ny fitrandrahana.
Previous post: Геологија на индонезиската пемза
Next post: ഇന്തോനേഷ്യൻ പ്യൂമിസിന്റെ ജിയോളജി